နွေဦးရာသီရဲ့ ဧည့်ရိပ်မြုံလေး (သို့) Acacia Tea Salon
28 Mar 2018 . 3:58 PM
“နွေရောက်ပြီလေ…ရိုးတံကျဲကျဲ ပင်အိုတို့အလှချင်းလည်းပြိုင် လေရူးလေးအဝှေ့…ရွက်ဝါတွေလိပ်ပြာတွေရယ်…အကချင်းပြိုင်နေသလိုပင်” တဲ့။ ဆွတ်ပျံ့လွမ်းမောစရာ နွေရာသီကို သီချင်းလေးတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ တေးသံလေးတွေကို ဟိုတစဒီတစ ကြားလာရပြီနော်။ ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ၊ ပင်ခြောက်တွေဝေနဲ့ အရာရာဟာ လွမ်းစရာ၊ Feel စရာမကောင်းလှပေဘူးလား ဘော်ဘော်တို့ရေ။ ဒါဆိုရင်တော့ နွေရဲ့အရသာ၊ Mood ကို အပြည့်အဝခံစားဖို့ အေးအေးချမ်းချမ်း မျောဖို့ ကြွေလောက်စရာ နွေဦးကမ္ဘာလေးတစ်ခုတော့ လိုလာပြီမလား။
အေးအေးဆေးဆေး အနားယူမယ်။ ကိတ်လေးတွေ၊ Drinks လေးတွေ၊ Coffee လေးနဲ့ စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း ဒီနွေနေအပူကြီးကနေ ခနပြေးထွက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲ စီးမျောဖို့ဆို ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ အလှဆုံးရိပ်မြုံလေးတစ်ခုရှိတာ သိကြရဲ့လား။ ပူလောင်အိုက်စက်မှုတို့နဲ့ ဝေးရာ ဒီကမ္ဘာလေးကတော့ ဒီနွေအတွက် နားခိုလို့ကောင်းမယ့် Tea Salon လေး တစ်ခုပါ။ ကဲ…ဖန်အဆောက်အဦးလှလှလေး၊ ခြံဝန်းလေး၊ ချစ်စရာအခန်းငယ်လေးတွေရှိတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့တင် ကြွေသွားလောက်မယ့်ဆိုင်ဆိုတာနဲ့ ရိပ်မိကြပြီမလား? ဒါဆိုရင်တော့ အခရာနဲ့တူတူ Acacia Tea Salon လေးကို သွားလည်လိုက်ကြရအောင်။
နေရာက ဝေးသီခေါင်ဖျား သွားလာရခက်တဲ့ထဲမပါဘူးနော်။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းပေါ်တင်ရှိတာဆိုတော့ သွားရလာရမခက်ခဲဘူး။ နောက် သူက ခြံဝန်းလေးနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆိုတော့ ကားရပ်ရလည်း အဆင်ပြေတယ်။ ဝင်ဝင်ခြင်းဆိုသလိုပဲ အိုအေစစ်လေးတစ်ခုကို ရောက်သွားသလို အရာရာ စိမ်းစိုလို့။ သူက Main အဆောက်အဦးရယ်၊ မှန်အိမ်လေးရယ်၊ အပြင်ခြံဝန်းထဲက နေရာလေးတွေရယ် ၃,၄ နေရာလောက်ရှိတော့ သာယာနေတာတော့အမှန်ပဲ။
တွေ့တွေ့ချင်း အဲ့မှန်အဆောက်အဦလေးက ဖမ်းစားလွန်းတော့ ဒါမျိုးဆို လက်မနှေး အစားအသောက်လေး မှာရင်း ဓါတ်ဖမ်းကြမဟေးဆိုပြီး ပျော်ပျော်ကြီး ဝင်သွားလိုက်မှ အားပါးပါး ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိတ်နံ့၊ မုန့်နံ့လေးတွေကမွှေး၊ Air-con လေးကအေးနဲ့ ဇိမ်ကျလိုက်တာဆိုတာ။ အဲ့မှန်အိမ်လေးထဲမှာရယ်၊ မှန်အိမ်လေးအပြင်ရှေ့မှာရော၊ ဘေးခြံဝန်းထဲမှာရော ခုံလေးတွေအစီရီခင်းထားတယ်။ အဓိကက မုန့်တွေဖုတ်တယ်။ Take Away အတွက် အဓိက ရောင်းတယ်။
မုန့်တွေထားတဲ့ မှန်ခန်းလေးထဲမှာတော့ Egg tart တွေ၊ Puff တွေ၊ Cake တွေ၊ စားချင်စရာအချိုပွဲလေးတွေက သရေကျစရာ အနံ့နဲ့တင်ဆွဲဆောင်လွန်းနေတော့ ဘာရမလဲ Cheese တွေ Bacon တွေနဲ့ ဖုတ်ထားတဲ့ Leek and Bacon Tart အကိတ်ကြီးရယ်၊ Ham Cheese Danish လေးရယ် မှာချလိုက်တယ်ကွာ။ ဈေးနှုန်းလေးတွေက ၁၀၀၀, ၂၀၀၀, ၃၀၀၀ ဝန်းကျင်လေးတွေပါပဲ။
ပူတာအိုက်တာကတမျိုးဆိုတော့ ရေခဲမုန့်အေးအေးမွှေးမွှေးလေးကလည်း စားချင်သေးတယ်လေ။ ဆိုတော့ကာ Chocolate ရယ်၊Green Tea လေးရယ် မှာခဲ့လိုက်ပါလေရော။ Green Tea လေးက သူ့ဆိုင်ရဲ့ အမှာများကြတဲ့ Special Item တဲ့။ သူကတော့ တစ်ပွဲကို ၃၅၀၀ ပါတဲ့။
မှာတာလေးတွေ လာမချခင် နေရာလေးကို အလှဆုံးခုံလှလှလေးရွေးယူ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ တစ်လှည့်စီဓါတ်ဖမ်းရင်း စောင့် အဆင်ကိုပြေနေရော။ ခနနေရော ရောက်လာပါပြီဗျား။ Cheese နံ့ ကြက်ဥနံ့လေးသင်းနေတဲ့ Tart လေး စားပွဲပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မနေနိုင်တော့လို့ တန်းကို တစ်ဇွန်းမြည်းလိုက်တာ။
ကြက်ဥသားလေးအိစက်ပြီး Cheese အရသာ ငန်ကျိကျိလေး ဒီကြားထဲ Bacon အသားလွှာတွေနဲ့ဆိုတော့ အဲ့ ၃ ခုပေါင်းထားတဲ့အရသာကို တွေးသာတွေးကြည့်ပါတော့။ ပြောရင်းကို ပြန်စားချင်တယ်။ Egg Tart ကြီးကအကြီးကြီး။ တစ်ခုလုံးစားပြီးရင်တော့ အီဆိမ့်ဖို့သာပြင်ပေတော့ပဲ။
နောက်ထပ် Ham Cheese Danish လေးက အဆိမ့်နဲ့ အလေးဓါတ်လေးပဲ။ သူကတော့ အဆာပြေစာလေးပေါ့။ အရသာကတော့ မုန့်သားရဲ့ လတ်ဆတ်မှုက မွှေးနေရော။ သူဆို ၁၀၀၀ ပါတဲ့။
ရေခဲမုန့်လေးတွေက အရောင်လေးရော၊ အပြင်ဆင်လေးရော လှမှလှ အဲ့အပြင် ကိုယ်ကြွေမိတာက တစ်ပွဲမှာ2Scoop တောင်ထည့်ပေးထားတော့ အဝစားပဲ။ ၃၅၀၀ ဆိုတာတော့ ဈေးမကြီးဘူးလေနော့။
ချောကလက်လေးက ခါးသက်သက်ချိုမြမြလေး၊ ချောကလက်ရည်လေးဆမ်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ Green Tea လေးဆိုလည်း လက်ဖက်စိမ်းနံ့လေးတွေသင်းလို့ မွှေးနေရော။ သူက အဆိမ့်ဘက်မသွားဘဲ အချိုတော့ ပိုကဲတယ်။ အချိုလေး လျှော့ပြီး နို့ပိုသုံးရင်ပိုပြေမလားပဲ။ ရေခဲမုန့် ၂ခုလုံးပုံမှန်အရသာတွေပါပဲ။ ထင်သလောက်ကြီးတော့ အားမရဘူး။
အပြင်မှာစားသောက်ပြီးတော့ ဆိုင်ရဲ့ ပင်မဆောင်ထဲဝင်မွှေလိုက်တာ ရောင်စုံချစ်စရာ ကိတ်လေးတွေ၊ အချိုပွဲ ကိတ်ခြောက်၊ မုန့်အစုံလင်ရယ်၊ သူ့ဆီကကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ သကြားလုံး၊ ချောကလက်လေးတွေပါတွေ့ရတယ်။ တော်တော်စုံပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း ခန့်မှန်းထားသလောက် မကြီးတာတွေ့ရတယ်။ ကိတ် တစိတ်ကို ၄၅၀၀,၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ပါ။ မွေးနေ့ကိတ်လေးတွေလည်း လှမှလှ။ သူအဓိက ဖမ်းစားတာက ထုပ်ပိုးမှုလှလှနုနုလေးတွေနဲ့ပါ။
ဒီဆိုင်က ဈေးကြီးတယ်လို့နာမည်ကြီးပေမယ့် တချို့မုန့်တွေ တော်တော်များများက ပုံမှန် ကော်ဖီဆိုင်ကဈေးနှုန်းလေးတွေလောက်ပဲမို့ စားလို့သောက်လို့ရပါသေးတယ်။
အဓိက ဆွဲဆောင်နေတာကတော့ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်နဲ့ Fairy Tale ဆန်ဆန် အတွင်းဘက်က ဂန္ဓဝင်ဆန်တဲ့စားပွဲလေးတွေ၊ ထိုင်ခုံလေးတွေနဲ့၊ အခန်းအလှဆင်ယင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါပဲ။ ကောင်မလေးတွေဆိုရင်တော့ဖြင့် လာပြီးမပြန်ချင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်မှာအသေချာပဲ။ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ဒီရာသီအတွက် အနားယူလို့လည်း ကောင်းတယ်။ ဆိုင်လေးကလည်း လှလွန်းတာကိုး။
ဝန်ထမ်းတွေ Service ပုံမှန်ပါပဲ။ ဈေးလေးတွေလည်း ဒိထက်ပိုလျှော့ပေးရင် ပျော်မိမှာ။ တချို့ဟာတွေတော့ ဈေးတအားများတယ်။ အရသာအတွက်တော့ ကြိုက်တာရော၊ မကြိုက်တာရော ရှိပေမယ့် သန့်ရှင်းမှုအတွက်တော့ လုံးဝအပြည့်ပေးပါတယ်။
မယုံမရှိနဲ့နော်။ အခရာက မိန်းကလေးတွေတောင် ပုံတွေတဝကြီး ဓါတ်ဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့ ကိုယ်တွေလို ဓါတ်ပုံသရဲတွေအတွက်ရော၊ နွေအပူဒဏ်ခနလေးရှောင်ချင်သူ မိဘပြည်သူတွေအတွက်ရော နေ့ခင်းနေ့လည် ထမင်းစားပြီးချိန်လေး အချိုတည်းဖို့၊ ညနေ အပြန် ဒိတ်လုပ်ဖို့ အခရာအနေနဲ့ အကြံပေးလိုက်ပြီဗျို့။ ဖွင့်ချိန် မနက် ၈ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိတဲ့နော်။ လိပ်စာအပေါ်ဆုံးမှာ ဦးဦးဖျားဖျား သတင်းပါးပြီးသားနော်။ သွားပြီးရင်လည်း ဘာလေးကြိုက်ခဲ့လဲ ပြန်မျှဝေပေးဦးနော်။
နှဦေးရာသီရဲ့ ဧညျ့ရိပျမွုံလေး (သို့) Acacia Tea Salon
“နှရေောကျပွီလေ…ရိုးတံကြဲကြဲ ပငျအိုတို့အလှခငျြးလညျးပွိုငျ လရေူးလေးအဝှေ့…ရှကျဝါတှလေိပျပွာတှရေယျ…အကခငျြးပွိုငျနသေလိုပငျ” တဲ့။ ဆှတျပြံ့လှမျးမောစရာ နှရောသီကို သီခငျြးလေးတှနေဲ့ပုံဖျောထားတဲ့ တေးသံလေးတှကေို ဟိုတစဒီတစ ကွားလာရပွီနျော။ ရှကျဟောငျးတှကွှေေ၊ ပငျခွောကျတှဝေနေဲ့ အရာရာဟာ လှမျးစရာ၊ Feel စရာမကောငျးလှပဘေူးလား ဘျောဘျောတို့ရေ။ ဒါဆိုရငျတော့ နှရေဲ့အရသာ၊ Mood ကို အပွညျ့အဝခံစားဖို့ အေးအေးခမျြးခမျြး မြောဖို့ ကွှလေောကျစရာ နှဦေးကမ်ဘာလေးတဈခုတော့ လိုလာပွီမလား။
အေးအေးဆေးဆေး အနားယူမယျ။ ကိတျလေးတှေ၊ Drinks လေးတှေ၊ Coffee လေးနဲ့ စာအုပျလေးဖတျရငျး ဒီနှနေအေပူကွီးကနေ ခနပွေးထှကျပွီး စိတျကူးယဉျကမ်ဘာထဲ စီးမြောဖို့ဆို ရနျကုနျမွို့ထဲမှာ အလှဆုံးရိပျမွုံလေးတဈခုရှိတာ သိကွရဲ့လား။ ပူလောငျအိုကျစကျမှုတို့နဲ့ ဝေးရာ ဒီကမ်ဘာလေးကတော့ ဒီနှအေတှကျ နားခိုလို့ကောငျးမယျ့ Tea Salon လေး တဈခုပါ။ ကဲ…ဖနျအဆောကျအဦးလှလှလေး၊ ခွံဝနျးလေး၊ ခဈြစရာအခနျးငယျလေးတှရှေိတဲ့ အပွငျအဆငျနဲ့တငျ ကွှသှေားလောကျမယျ့ဆိုငျဆိုတာနဲ့ ရိပျမိကွပွီမလား? ဒါဆိုရငျတော့ အခရာနဲ့တူတူ Acacia Tea Salon လေးကို သှားလညျလိုကျကွရအောငျ။
နရောက ဝေးသီခေါငျဖြား သှားလာရခကျတဲ့ထဲမပါဘူးနျော။ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ဆရာစံလမျးပျေါတငျရှိတာဆိုတော့ သှားရလာရမခကျခဲဘူး။ နောကျ သူက ခွံဝနျးလေးနဲ့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ဆိုတော့ ကားရပျရလညျး အဆငျပွတေယျ။ ဝငျဝငျခွငျးဆိုသလိုပဲ အိုအစေဈလေးတဈခုကို ရောကျသှားသလို အရာရာ စိမျးစိုလို့။ သူက Main အဆောကျအဦးရယျ၊ မှနျအိမျလေးရယျ၊ အပွငျခွံဝနျးထဲက နရောလေးတှရေယျ ၃,၄ နရောလောကျရှိတော့ သာယာနတောတော့အမှနျပဲ။
တှတှေ့ခေ့ငျြး အဲ့မှနျအဆောကျအဦလေးက ဖမျးစားလှနျးတော့ ဒါမြိုးဆို လကျမနှေး အစားအသောကျလေး မှာရငျး ဓါတျဖမျးကွမဟေးဆိုပွီး ပြျောပြျောကွီး ဝငျသှားလိုကျမှ အားပါးပါး ဝငျလိုကျတာနဲ့ ကိတျနံ့၊ မုနျ့နံ့လေးတှကေမှေး၊ Air-con လေးကအေးနဲ့ ဇိမျကလြိုကျတာဆိုတာ။ အဲ့မှနျအိမျလေးထဲမှာရယျ၊ မှနျအိမျလေးအပွငျရှမှေ့ာရော၊ ဘေးခွံဝနျးထဲမှာရော ခုံလေးတှအေစီရီခငျးထားတယျ။ အဓိကက မုနျ့တှဖေုတျတယျ။ Take Away အတှကျ အဓိက ရောငျးတယျ။
မုနျ့တှထေားတဲ့ မှနျခနျးလေးထဲမှာတော့ Egg tart တှေ၊ Puff တှေ၊ Cake တှေ၊ စားခငျြစရာအခြိုပှဲလေးတှကေ သရကေစြရာ အနံ့နဲ့တငျဆှဲဆောငျလှနျးနတေော့ ဘာရမလဲ Cheese တှေ Bacon တှနေဲ့ ဖုတျထားတဲ့ Leek and Bacon Tart အကိတျကွီးရယျ၊ Ham Cheese Danish လေးရယျ မှာခလြိုကျတယျကှာ။ ဈေးနှုနျးလေးတှကေ ၁၀၀၀, ၂၀၀၀, ၃၀၀၀ ဝနျးကငျြလေးတှပေါပဲ။
ပူတာအိုကျတာကတမြိုးဆိုတော့ ရခေဲမုနျ့အေးအေးမှေးမှေးလေးကလညျး စားခငျြသေးတယျလေ။ ဆိုတော့ကာ Chocolate ရယျ၊Green Tea လေးရယျ မှာခဲ့လိုကျပါလရေော။ Green Tea လေးက သူ့ဆိုငျရဲ့ အမှာမြားကွတဲ့ Special Item တဲ့။ သူကတော့ တဈပှဲကို ၃၅၀၀ ပါတဲ့။
မှာတာလေးတှေ လာမခခြငျ နရောလေးကို အလှဆုံးခုံလှလှလေးရှေးယူ၊ သူငယျခငျြးနဲ့ တဈလှညျ့စီဓါတျဖမျးရငျး စောငျ့ အဆငျကိုပွနေရေော။ ခနနရေော ရောကျလာပါပွီဗြား။ Cheese နံ့ ကွကျဥနံ့လေးသငျးနတေဲ့ Tart လေး စားပှဲပျေါရောကျတာနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျပွီး မနနေိုငျတော့လို့ တနျးကို တဈဇှနျးမွညျးလိုကျတာ။
ကွကျဥသားလေးအိစကျပွီး Cheese အရသာ ငနျကြိကြိလေး ဒီကွားထဲ Bacon အသားလှာတှနေဲ့ဆိုတော့ အဲ့ ၃ ခုပေါငျးထားတဲ့အရသာကို တှေးသာတှေးကွညျ့ပါတော့။ ပွောရငျးကို ပွနျစားခငျြတယျ။ Egg Tart ကွီးကအကွီးကွီး။ တဈခုလုံးစားပွီးရငျတော့ အီဆိမျ့ဖို့သာပွငျပတေော့ပဲ။
နောကျထပျ Ham Cheese Danish လေးက အဆိမျ့နဲ့ အလေးဓါတျလေးပဲ။ သူကတော့ အဆာပွစောလေးပေါ့။ အရသာကတော့ မုနျ့သားရဲ့ လတျဆတျမှုက မှေးနရေော။ သူဆို ၁၀၀၀ ပါတဲ့။
ရခေဲမုနျ့လေးတှကေ အရောငျလေးရော၊ အပွငျဆငျလေးရော လှမှလှ အဲ့အပွငျ ကိုယျကွှမေိတာက တဈပှဲမှာ2Scoop တောငျထညျ့ပေးထားတော့ အဝစားပဲ။ ၃၅၀၀ ဆိုတာတော့ ဈေးမကွီးဘူးလနေော့။
ခြောကလကျလေးက ခါးသကျသကျခြိုမွမွလေး၊ ခြောကလကျရညျလေးဆမျးထားတဲ့အတိုငျးပဲ။ Green Tea လေးဆိုလညျး လကျဖကျစိမျးနံ့လေးတှသေငျးလို့ မှေးနရေော။ သူက အဆိမျ့ဘကျမသှားဘဲ အခြိုတော့ ပိုကဲတယျ။ အခြိုလေး လြှော့ပွီး နို့ပိုသုံးရငျပိုပွမေလားပဲ။ ရခေဲမုနျ့ ၂ခုလုံးပုံမှနျအရသာတှပေါပဲ။ ထငျသလောကျကွီးတော့ အားမရဘူး။
အပွငျမှာစားသောကျပွီးတော့ ဆိုငျရဲ့ ပငျမဆောငျထဲဝငျမှလေိုကျတာ ရောငျစုံခဈြစရာ ကိတျလေးတှေ၊ အခြိုပှဲ ကိတျခွောကျ၊ မုနျ့အစုံလငျရယျ၊ သူ့ဆီကကိုယျတိုငျလုပျတဲ့ သကွားလုံး၊ ခြောကလကျလေးတှပေါတှရေ့တယျ။ တျောတျောစုံပါတယျ။ ဈေးနှုနျးအနနေဲ့လညျး ခနျ့မှနျးထားသလောကျ မကွီးတာတှရေ့တယျ။ ကိတျ တစိတျကို ၄၅၀၀,၅၀၀၀ ဝနျးကငျြပါ။ မှေးနကေိ့တျလေးတှလေညျး လှမှလှ။ သူအဓိက ဖမျးစားတာက ထုပျပိုးမှုလှလှနုနုလေးတှနေဲ့ပါ။
ဒီဆိုငျက ဈေးကွီးတယျလို့နာမညျကွီးပမေယျ့ တခြို့မုနျ့တှေ တျောတျောမြားမြားက ပုံမှနျ ကျောဖီဆိုငျကဈေးနှုနျးလေးတှလေောကျပဲမို့ စားလို့သောကျလို့ရပါသေးတယျ။
အဓိက ဆှဲဆောငျနတောကတော့ အဖွူရောငျ၊ ပနျးရောငျနဲ့ Fairy Tale ဆနျဆနျ အတှငျးဘကျက ဂန်ဓဝငျဆနျတဲ့စားပှဲလေးတှေ၊ ထိုငျခုံလေးတှနေဲ့၊ အခနျးအလှဆငျယငျထားတဲ့ပုံလေးတှပေါပဲ။ ကောငျမလေးတှဆေိုရငျတော့ဖွငျ့ လာပွီးမပွနျခငျြတော့လောကျအောငျဖွဈမှာအသခြောပဲ။ အေးအေးငွိမျ့ငွိမျ့လေးနဲ့ ဒီရာသီအတှကျ အနားယူလို့လညျး ကောငျးတယျ။ ဆိုငျလေးကလညျး လှလှနျးတာကိုး။
ဝနျထမျးတှေ Service ပုံမှနျပါပဲ။ ဈေးလေးတှလေညျး ဒိထကျပိုလြှော့ပေးရငျ ပြျောမိမှာ။ တခြို့ဟာတှတေော့ ဈေးတအားမြားတယျ။ အရသာအတှကျတော့ ကွိုကျတာရော၊ မကွိုကျတာရော ရှိပမေယျ့ သနျ့ရှငျးမှုအတှကျတော့ လုံးဝအပွညျ့ပေးပါတယျ။
မယုံမရှိနဲ့နျော။ အခရာက မိနျးကလေးတှတေောငျ ပုံတှတေဝကွီး ဓါတျဖမျးခဲ့တာဆိုတော့ ကိုယျတှလေို ဓါတျပုံသရဲတှအေတှကျရော၊ နှအေပူဒဏျခနလေးရှောငျခငျြသူ မိဘပွညျသူတှအေတှကျရော နခေ့ငျးနလေ့ညျ ထမငျးစားပွီးခြိနျလေး အခြိုတညျးဖို့၊ ညနေ အပွနျ ဒိတျလုပျဖို့ အခရာအနနေဲ့ အကွံပေးလိုကျပွီဗြို့။ ဖှငျ့ခြိနျ မနကျ ၈ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိတဲ့နျော။ လိပျစာအပျေါဆုံးမှာ ဦးဦးဖြားဖြား သတငျးပါးပွီးသားနျော။ သှားပွီးရငျလညျး ဘာလေးကွိုကျခဲ့လဲ ပွနျမြှဝပေေးဦးနျော။